Zanu-PF Inoti Hapana Nhaurirano Dzichaitwa Kana Zvirango Zvisati Zvabviswa
Ndira 28, 2010
Vachitaura nebepanhau re Herald nezuro, mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri, Va Ephraim Masawi, vakati bato ravo harisi kuzobva parimire kudzamara MDC yawirirana kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zanu-PF inoti hapana kutaurirana kuchaitwa zvekare munhaurirano dzayo ne MDC kudzamara zvirango zvakatemerwa bato iri zvabviswa. Izvi zvakabuda neChitatu muHarare pamusangano wedare guru reZanu PF, kana kuti politburo.
Vachitaura nebepanhau re Herald mushure memusangano uyu, mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri, Va Ephraim Masawi, vakati bato ravo harisi kuzobva parimire kudzamara MDC yawirirana nenyika dzainodyidzana nadzo dzakaita seBritain ne America, kuti zvirango izvi zvibviswe.
VaMasawi vanotizve mashoko akataurwa muparamende negurukota rinoona nezve kunze kweBritain, Va David Milliband, ekuti vachabvunzawo nyika yavo ichabvisa zvirango kana MDC ichigutsikana nazvo, anoratidza kuti MDC ndiyo yakakumbira kuti zvirango izvi zvitemerwe Zanu-PF.
VaMasawi varamba kutaura ne Studio7 vachiti havachabvumidzwe kutaura nenhepfenyuro yeStudio7.
Asi MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti Zanu PF yagara ichinetsa munhaurirano idzi. MDc inotiwo chasara chete kuendesa nyaya iyi kuSADC, sezvo iri iyo mutongi gava wegakava riri muZimbabwe.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti Zanu-PF iri kuratidza kuti yawomerwa izvo zvava kupa kuti itsvage uta nemugate.
VaTsvangirai vari kunetsana naVaMugabe muhurumende yemubatanidzwa zvikuru panyaya yekugadzwa kwagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, muchuchisi mukuru wenyika, VaJohannes Tomana, pamwe nekuramba kwaVaMugabe kugadza mubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, semutevedzeri wegurukota rezvekurima.